That's so good, right?: June 2014
Blow - Jobs
ကီး…ကီးကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း (၁)
အဟမ်း…..ပါးစပ် အာခံတွင်း အစုံအလင်နှင့် လိင်ကိစ္စပြုလုပ်ခြင်း ဆက်ဆံခြင်း(Oral sex) ကိစ္စမှာ လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို လျှာလေးနဲ့ကလိတဲ့ (Rimming Case)ကိုတော့ သီးခြားပြောမယ်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ လိင်အင်္ဂါတွေကို ပါးစပ်အားခံတွင်း အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ သာယာမှုရှာတဲ့ ကီးသော(Blow-jobs)ကိစ္စလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ် အားလုံးသောသူတွေ သိပြီးသားကိစ္စပေမယ့်လေ။ သိပ်အရေးမကြီးဘူးထင်ရပေမယ့် နည်းနည်းတော့ အရေးပါနေလို့ပါခင်ဗျာ့။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကီးတယ်(Blow-Job)ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တံတစ်ခုကို စာဖတ်သူရဲ့ ပါးစပ်၊ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊သွားနှင့် (တကယ်လို့ သင်ဟာ ရဲရင့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်) လည်မျိုများနှင့် သာယာမှုပေးခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ရမ္မက်ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လိုလေးလေး နက်နက်ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာပြဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။
အဓိကပေးချင်တဲ့ အကြံဥာဏ်ကတော့ စီးမျောမှုနောက်ကိုလိုက်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကီးတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတာကနေ စတင်ကြတာပါပဲ စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုတာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်လေ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြုံဆုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်အရ အခြားသော အချက်အလက်လေးတွေမပြောပြခင် သေသေချာချာပြုလုပ်ရမှာက စာဖတ်သူ ရည်းစား သို့မဟုတ် ပါတနာရဲ့ လိင်တံကဘယ်လိုရှိတယ် ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတာသိရမှာ သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်နှင့်လိင်ကိစ္စပြုလုပ်ခြင်း(Oral Sex) ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်ထိချစ်ကြောင်း နှစ်ဦးသားအထိအတွေ့မှာဘယ်လောက် သာယာကြောင်းပြဆိုနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှကြိုက်နှစ်သက် လက်ခံ လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်မကြိုက်တာကို မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။
အရိပ်အမြွက်အချို့ (Hints and Tips)
အဦးဆုံး ဘာအကြောင်းမှစမရေးခင် ပြောချင်တာကတော့ လုံခြုံစိတ်ချလိင်မှုဘ၀ဖြစ်ဖို့ရယ် ကွန်ဒုံးတစ်ခုရယ်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့သိပ်မရင်းနီး သိပ်မသိသေးသော အချိန်တိုလေးပဲခင်မင်သေးသောသူတစ်ယောက် (Sauna မှာ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်အတူတွေ့ဖူးရုံ၊ Gym မှာ အတူကစားနေရုံ၊ ရုပ်ကလေးကချောနေရုံ) အတွက် စာဖတ်သူရဲ့ဘ၀ကို မစွန့်စားလိုက်သင့်ပါဘူး။ ပါးစပ်နဲ့သံဝါသပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းအခုန်တွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြေနည်းတယ် စသဖြင့်ပေါ့နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စွန့်စားရာကျမနေဘူးလား။ မည်သို့ဆိုနေစေကာမှု ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုထိရောက်တယ်၊ ပြီးတော့ စာဖတ်သူရဲ့ လျှာနုနုလေးမှာ အားနည်းချက်ပွိုင့်လေး (သွားပွတ်တံနှင့် ထိခိုက်မိလို့ သွေးယိုနေတာမျိုး၊ အရိုးကိုက်မိလို့ သွားဖုံးတွေ ပွန်းပဲ့နေတာမျိုး၊ လျှာကွဲနေတာမျိုး) တွေရှိနေနိုင်တာပဲလေ။ ဒါကြောင့် Be Safe!!
အဲ့မှာပဲရပ်မနေနဲ့လေ (Don’t Just Stay There) - ပါးစပ်ကြီးကိုဖွင့် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရပ်တန့်နေခြင်းမျိုးက တော်တော်ဆိုးတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ ပေးသူရော ယူသူရောနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ။
စာဖတ်သူ (ကီးပေးသူဖြစ်ပါက) အနေနဲ့ လက်အစုံကိုသုံးတာ၊ စာဖတ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ၊ စာဖတ်သူရဲ့သွား(နုနုညံ့ညံ့လေး)၊ စာဖတ်သူရဲ့လျှာနဲ့အတူ ကိုယ်ဟန်အနေအထားမျိုးစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံနေကာ ကစားနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။
သူ့ကိုကြည့် (Look at him) - သူ့ငပဲကို ကိုယ်ကကီးနေစဉ်မှာ သူနဲ့မျက်ဝန်းချင်း အကြည့်ဆုံနေဖို့ eye contact ရှိနေဖို့အမြဲတစေ ကြိုးစားနေသင့်ပါတယ်။ အဲ့ကိစ္စက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုမှာအရေးပါသလို စာဖတ်သူအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင် ပါသဗျ။
ဟိုသည်ကစား (Play around) - ရမ္မက်သွေးကြွစေသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသော ရွှေဥများ(balls)၊ ခရေ၀န်းကျင် (ass)၊ အမျိုးသားတွေရဲ့ G-Spot area လို့ဆိုနိုင်တဲ့ Perineum (စအိုဝနှင့် ဆီးအိမ်ကြားရှိဧရိယာ)တွေဟာ စာဖတ်သူရဲ့စွမ်းရည်ကို တစ်ဖက်သား ကြွေသွားအောင်ထိတွေ့အစွမ်းပြနိုင်မယ့်နေရာများဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့လက်တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချရမှာက တစ်ဖက်သားရဲ့ ငပဲကိုကီးနေချိန်(sucking) မှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို တို့ထိခြင်း၊ သူ့ပေါင်ခွဆုံတွေကို ဖျစ်ညှစ်ခြင်း၊ တခြားအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းမျိုးတွေမှာပါ။
ပါးစပ်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ အနေအထားပုံသဏ္ဍာန်တွေက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ရတယ့် အနေအထားပုံဟန်တစ်ချို့ကို ရွေးချယ်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တွေလည်း စိတ်ခံစားမှုမှာ တင်းကြပ်နေတာမျိုးမဖြစ် မသက်မသာခံစားရတာမျိုးမကြုံဘဲ တစ်ဖက်သား ပါတနာကို လည်း ကျေနပ်နှစ်သက်စေမယ့် အနေအထားလေးတွေဖြစ်ရင် နှစ်ဦးသားဆက်ဆံပက်သက်ကြချိန်မှာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာ ပေါ့လေ။
ဒီအနေအထားက ပုံမှန်လူသုံးများသောအနေအထားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ `မြန်မြန် နဲ့အဆင်ပြေပြေ´ စတိုင်လ် လိင်ကိစ္စ ပတ်သက်မှုအနေအထားတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့သော အသက်အရွယ်အရ ဒီပုံဟန်အနေအထားဟာ ပါတနာ နှစ်ဦးလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ပေးသူ ယူသူနှစ်ဦးစလုံး ကိုယ်ကြိုက်သလို အနှေးအမြန်လှုပ်ရှားလို့ အဆင်ချောတယ်လေ။
ထုံးစံအတိုင်း ကီးပေးသူအနေနဲ့ လိင်တံကို ပါးစပ်ထဲသွင်းရာမှာ နုနုညံ့ညံ့ငြင်ငြင်သာသာအထုတ်အသွင်းပြုလုပ်နိုင်သလို အတွင်းထဲထိ အားလုံးသွင်းမလားပြုစွမ်းနိုင်ပါရဲ့။ အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးနေတုန်း တစ်ဖက်သားပါတနာပိုမိုပြီး ခံစားမှုတွေ ဒီရေတက်အောင်လုပ်ချင်ပါက လက်နှစ်ဖက်က လက်ချောင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး တင်သားဆိုင်တွေကိုပါ ပွတ်သပ်ရင်း မိမိပါးစပ်ထဲ လိင်တံအထုတ်အသွင်း နည်းမှန် လမ်းမှန်ဖြစ်အောင် တင်ပါးတွေကို ဖိလိုက်ကြွလိုက်ကစားခိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်။
အကီးခံသူ (Top Guy) အနေနဲ့လည်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးများစွာရှိနေပါတယ်။
အခုလက်ရှိအနေအထားမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အနှေးအမြန် ထိန်းလို့ရမယ်၊ ကီးပေးနေသူရဲ့ ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်ကာ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းတွေကို ကြိုက်သလိုလှုပ်ရှားကာ ပိုမို စွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ Mouth-fucking ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။
သတိတော့ထား (Be careful) - အလွန်နုညံ့သောလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလက်မှာဝတ်ဆင်ထား သော လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ ပွတ်ရှမိမှာ၊ သွားအစွယ်တွေရှိရင်လည်း အနေအထားမမှန်ပါက ပွန်းပဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိပါတနာ ရဲ့ ရတနာတွေကိုတန်ဖိုးထား ကိုင်တွယ်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
ဒီအနေအထားပုံဟန်မှာ တစ်ခုအားသာတာက ကီးပေးနေသူကိုယ်တိုင်က ပါတနာကို ကီးပေးနေချိန်မှာပဲ ကိုယ့်လိင်အင်္ဂါကို ကိုယ့်ဖာသာ ကိုင်ပြီး အာသာဖြေနိုင်တဲ့အနေအထားရနေပါတယ်။
အိပ်ယာထဲဝယ် လှဲလျောင်းရင်း (On Bed – Lying)
အိပ်ယာထဲဝယ် လှဲလျောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ နှစ်ဦးသားရွေးချယ်နိုင်တဲ့ပုံဟန်တွေကအများသားပါပဲ။ ကီးလို့အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားတစ်ချို့တော့ရွေးဖို့လိုမယ်လေ။ အကီးခံမယ့်သူရဲ့ လိင်တံဆိုဒ်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကာ ဘယ်လိုအဆင်ပြေ မလည်းဆိုတာ စဉ်းစားရလွယ်ပါတယ်။ အကီးခံမယ့်သူက ခါးနောက်မှာ ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့်သုံးလေးလုံးလောက်ခုပြီး သက်သောင့်သက်သာ လျောင်းနေစဉ် ကီးတဲ့လူက နံဘေးကတစောင်းလှဲလိုက်ရင်း စိတ်တိုင်းကျကိုင်ပြီးကီးနိုင်သလို ပေါင်တံနှစ်ခုကြားဝင်ကာ မှောက်လျက် အနေအထားနဲ့
နောက်တစ်ကြိမ်လောက်ထပ်ပြောရရင့်တော့ အကီးခံမယ့်သူရဲ့လိင်တံဆိုဒ်အနေအထားအတိုအရှည်ကဘယ်လိုကီးရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ လိင်တံနည်းနည်းရှည်တဲ့သူကို ကီးမယ်ဆိုရင် အရင်းပိုင်းကို အထက်အောက်ပွတ်သပ်ကစားပေး တုန်းမှာ ထိပ်ကွမ်းသီးခေါင်းနားကို ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့စုပ်ယူကီးပေးနိုင်တာပါပဲ။
အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ ထိုင်နေထိုင်နေ ခုံတန်းလျားမှာ့ ထိုင်နေထိုင်နေ အနေအထားက ကီးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ နောက် တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောရရင် ကီးသူအနေနဲ့ ထိုင်နေတဲ့အကီးခံသူရဲ့အနေအထားကိုလိုက်လို့ရှေ့ကနေတဲ့ရွေးချယ်မှုကအဆင်ပြေပါမယ်။
မကြာခဏဆိုသလို နေရာပြောင်းအနေအထားပြောင်းရမှာပေါ့နော်။ အမျိုးသားအင်္ဂါ အမျိုးသားလိင်တံဟာ ကွဲပြားတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုရှိ သလို ပါးစပ် အာခံတွင်းဆိုတာကလည်း ကွဲပြားတဲ့ပုံသဏ္ဌာန်တွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ခု ပတ်လည်ကို စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်ကစားခြင်းဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခံစားမှုများကိုရရှိမှာတော့သေချာသလားပဲနော်။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ပါတနာကို ဘယ်လိုစိတ်ပါလာအောင်လုပ်မလဲ ဘယ်လို နှိုးဆွရမလဲဆိုတာ သေချာမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အကီးခံသူဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ ထိုင်ပြီး ညည်းညူမိန်းမောနေတဲ့သူသက်သက်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ကီးပေးနေတဲ့ ပါတနာရဲ့ ဦးခေါင်းကို ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးတာမျိုး၊ အနည်းငယ်ထိန်းကိုင်ပေးပြီး ဖိဖိပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကြိုးစားကြည့်လို့ရသေးတာက သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ပွတ်သပ်စမ်းကိုင်လို့ရသလို နောက်ဆုံး သူ့ငပဲကို ကိုယ်တွယ်ကစားလို့ရနိုင်သေးတယ်ပေါ့။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ 69 ဖြစ်နိုင်စရာနည်းလမ်းကိုတည်ဆောက်ဖို့ သို့မဟုတ်?
ပြောစရာရှိတာက ကီးသူအနေနဲ့မှတ်ထားသင့်တဲ့အရာက အကီးခံသူရဲ့ရွှေဥတွေကိုကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပေးပါ။ အမြဲအရေးကြီးတဲ့အရာပါ။
ကောင်းပါပြီ ဒီအနေအထားက လူတိုင်းလိုလိုသိထားကြပါတယ် တစ်ပြိုင်တည်း အပြန်အလှန်ကီးကြတဲ့အနေအထားပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စာနဲ့ရေးပြဖို့ကတော့ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်လေ။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ဘယ်လိုနေရနေရ ဒေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက်ကတော့ ပုံသဏ္ဌာန် အနေအထားဘယ်လိုလာလာဖြစ်နိုင်တာကိုး။
ထို့အပြင် 69 အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အပြန်အလှန် လိင်တံကို စုပ်ပြုကြခြင်း (သို့မဟုတ် rimming လုပ်ကြတာ စသဖြင့်ပေါ့)ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် စာဖတ်သူကိုအကြံဥာဏ်ပေးရရင် အိပ်ယာတစ်ခုပေါ် သို့မဟုတ် ပြန့်ပြူးတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားကိုလှဲလျောင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် စတင်လိုက်ပါလို့။ တစ်စုံတစ်ယောက်က Top မှာပဲနေနေတဲ့ အနေအထားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာက 69 ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ပြောစရာရှိတာက ပါးစပ်ထဲကို ထိုးသွင်းဆက်ဆံတဲ့အနေအထားမှာ နည်းနည်းတော့အန္တရာယ်မကင်းတာရှိ ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားသိပ်လှုပ်ရှားလို့အဆင်မပြေတာ အားအင်သုံးတဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလေးဆင်ခြင်ရတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ အားလုံး ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တဲ့ အရာတွေဖြစ်သွားနိုင်တာကိုး။
သို့သော် သင်ဟာ တစ်ကြိမ်ကောင်းကောင်းအတွေ့အကြုံရသွားပြီးရင်တော့ နောက်အကြိမ်တွေမှာတော့ လုံးဝအမိုက်စားပြုလုပ်သွားနိုင် မှာပါ။
69 လုပ်တာမှာ အရာအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်တယ်? ကောင်းပါပြီ နှစ်ဖက်သား လိင်ကိစ္စမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်ကြဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ သို့သော် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ကိစ္စသာယာမှုပြုလုပ်ရာမှာ ဒီပုံဟန်အနေအထားကိုကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက် ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ပါတနာကို သာယာမှုပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကသာယာမှုရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အာရုံစိုက်လို့မရပါဘူး အာရုံစိုက် ချင်ပါတယ်ဆိုလာသူများအတွက်ကတော့ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်နဲ့မစွမ်းပါဘူးလို့။
ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (Mouth – fucking)
ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ပါးစပ်ထဲကို လိင်တံအားအထုပ်အသွင်းပြုဆက်ဆံခြင်း လိင်တံကိုလက်ခံသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အသွင် သဘောထားဆက်ဆံခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာလည်း အနေအထားအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနေလို့ပြုလုပ်လို့ရတာပါပဲ။ အရင်ကပြောပြခဲ့တဲ့ အနေအထားပုံစံတွေနဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ active role မှနေသူက သူ့ပါတနာရဲ့ပါးစပ်ထဲကို ခါးဆုံကိုလှုပ်ရှား လျက် လိင်တံကိုအထုတ်အသွင်းပြုလုပ်ခြင်းအနေအထားပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုက ပါးစပ်နှင့်လိင်အင်္ဂါ ချိန်သားကိုက်လှုပ်ရှားမှုကျင့်သားရနေသူများအတွက် သီးသန့်သဘောဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး အရာကတော့ စာဖတ်သူ ကီးနေတဲ့လိင်တံဆိုဒ်အကြီးအသေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာပါပဲ။ Deep-throat လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် ပါးစပ်ထဲထည့်ထားတဲ့ လိင်တံကို ပါးစပ်အတွင်းမှာပဲ လှည့်ပတ်ကစားနေသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူရဲ့ ပါတနာကို ပါးစပ်ထဲ ထုပ်သွင်းလုပ်နေတဲ့အရှိန် ထိန်းသိမ်းလုပ်ဖို့ဖျောင်းဖျသင့်တယ်လေ။
ဒီပုံဟန်အနေအထားကို အိပ်ယာပေါ်မှာလုပ်လို့ရပေမယ့် mouth-fucking ဆိုတာက မတ်တပ်ရပ်နေရင်း ထိုင်နေရင်းအနေအထား စသဖြင့်လည်း ကစားလို့ရပါတယ်။
ထောက်ခံချက်ပေးရရင် ဒီအနေအထားမှာက ကီးသူအနေနဲ့မိမိရဲ့ လည်တိုင်ကို သိပ်ပြီးကစားစရာမလို အပင်ပန်းခံစရာသိပ်မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သတိမထားလက်လွယ်စပယ်လုပ်ရင်တော့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုလေးတွေရနိုင်ပါရဲ့လို့နော်။
ပြောင်းပြန် ဆက်ဆံ (Reversed Mouth-fuck)
တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပုံမှန်လုပ်နေကျအနေအထားမဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက ပြောင်းပြန်ကိုယ်ဟန်အနေအထားနဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုလိင်တံထိုးသွင်းဆက်ဆံ(Reversed Mouth-fuck) တာပါပဲ။ ဘေးမှာပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရင် ကျွန်တော်ဘာပြော တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုလဲ? ကီးတဲ့သူက ခုတင်စောင်း ခုံစောင်းမှာလှဲအိပ် ဦးခေါင်းကိုနောက်လှန်ချပြီး ပါးစပ်ဟထားတဲ့အနေအထားမှာ ထိုးသွင်းသူက လှုပ်ရှားတဲ့ပုံဟန်ပေါ့နော်။
ပါတနာက သူ့လိင်တံကို ပါးစပ်ထဲအလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ အရေးတကြီးပြောဖို့ကတော့ လည်မျိုထဲထိတိုင် လိင်တံကိုအထုတ်အသွင်းပြုမယ့် Deep-throating လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်ပါကြောင်းကိုပေါ့။ လည်မျိုထဲထိ လျောလျောရှူရှူသွင်းလို့ရသလို အော့အံချင်တာမျိုး အာခေါင်နုကိုထိခိုက်မယ့်အနေအထားတွေရှောင်ပြီး လိင်တံကို လက်ခံလို့ရမယ့် ကိုယ်ဟန်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလျင်စလိုထည့်သွင်းတာ လက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့ကိုတော့ ပြောပါရစေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံကိုလက်ခံသူရဲ့ လည်တိုင်အတွက် အထိအခိုက်မဖြစ်ဖို့လိုသလို ဦးခေါင်းကို အထိန်းအကွပ်ဖြစ်ဖို့လည်းဂရုပြုပေးရမှာပါ။
လည်မျိုထဲထိတိုင် (Deep Throating)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သတိထားဖို့ပြောခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီ။ လည်မျိုထဲထိတိုင် အထုတ်အသွင်းပြုဆက်ဆံခြင်း Deep throating နည်းလမ်းဟာ လိင်တံကို ပါးစပ်ထဲတွင်သာမက လည်မျိုထဲထိတိုင် လက်ခံသူက ထည့်သွင်းခွင့်ပြုရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးသဘောမျိုးကတော့ အထည့်အသွင်းမဟုတ်ခဲ့ရင် အာခေါင်နုကြွက်သားများကို စုပ်လုံး(Lollypop)ထိုးမိသလို အော့အံ့တာမျိုး ကီးတဲ့သူအနေနဲ့ခံစားရနေနိုင်တာပါပဲ။ သီအိုရီတစ်ခုအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောစကားကိုပြန်ရေးပြရရင်တော့ `လည်ပင်းနဲ့ မေးနဲ့ 90 ဒီဂရီအနေအထားမဖြစ်စေရပါဘူး။ 90 ဒီဂရီဆို အာခေါင်ပျော့နဲ့သွားထောက်မိပြီး ပျို့အန်ကုန်မယ်၊ လုပ်ပေးတဲ့သူ က အပေါ်ကနေ မေးနဲ့ လည်ပင်း ၁၈၀ ဒီဂရီအနေအထားဖြစ်အေင် တက်ခွပြီးလုပ်ပေးရမှာပါ´တဲ့။ ဒါကြောင့် deep-throat လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်တော့မှ အပြေားအလွှားအလျင်စလိုမလုပ်ဖို့ရယ် ဖြေးဖြေးအေးအေး စတင်ပြုလုပ်ဖို့ရယ် နောက်ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအတော်များများကတော့ သူတို့လည်မျိုထဲမှာ သူတို့ပါတနာရဲ့ပစ္စည်းကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ထည့်သွင်းခွင့်ပေးရတာ သာယာနေတတ်ကြတဲ့ခံစားချက်ကို သဘောကျနေတတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အဲ့လိုလူမျိုး ပါတနာမျိုးကို ကံကောင်းလို့ တွေ့ဆုံခဲ့ရရင်တော့ အလိုက်တသင့်ရယ် အကြမ်းပတမ်းဖက်မပြုလုပ်တာမျိုးရယ်နဲ့ဆက်ဆံပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်လိုက် ပါနော်။ အိုကေ?
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ကိစ္စပြုလုပ်ခြင်း ကိစ္စတစ်ခု (Oral sex) က အလွန်လုပ်ရကျိုးနပ်တဲ့သာယာမှုတစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူ တွေကတော့ စအိုဝနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် သာယာမှုရတာနည်းတယ်လို့မြင်တတ်ကြပါတယ်။ အချို့အကြောင်းအရာတွေကိုထောက် လို့ သဘောတူလို့ရပါရဲ့။ သို့သော် သင့်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲက သာယာမှုမျိုး ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုခုကိုရခြင်တယ်ဆိုရင် တော့ Oral sex ဖြင့်သာယာမှုရှာခြင်းဟာ ပါးစပ်ကနေ ညည်းညူသံတွေထွက်ရလောက်အောင် ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံ့အချို့အရတော့ အကောင်းဆုံး sexual chemistry အဖြေမှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သို့မဟုတ် တစ်ဦး တစ်ယောက် က မိမိ သို့မဟုတ် သူ့ပါးစပ်ဖြင့် ကျေနပ်သာယာမှုကိုဖြည့်စွမ်းပေးလိုက်နိုင်တဲ့ခဏ ခံစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ရရှိချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းမွန်ဆုံး အကျေနပ်ဆုံး အခိုက်အတန့်လေး ခံစားရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နေထိုင်ရာ အိမ်ကနေ ခပ်ဝေးဝေးမှာ ဆင်နွှဲကြဖို့ပါ။ ပေါက်တယ်နော်???
So, now it’s time to practice!
Alex Aung (25 June 2014)
Posted by Alex Aung at 8:09 PM No comments:
Labels: News and Info, ဘာသာပြန်
အမြဲလိုလို နိုင်ငံအနှံ့ခရီးဆန့်ပြီးအရောင်းထွက်နေရတဲ့ အရောင်းသမားတစ်ယောက်အဖို့ ပျင်းရိထုံထိုင်းချိန်မရှိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်က နာမည်ကြီးဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဌာနေအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တော့ ရန်ကုန်မြို့အပြင် ပဲခူး၊ မန္တလေး၊မြစ်ကြီးနား၊ လားရှိုးနှင့် ရခိုင်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေထိ အတော်ဆိုးဆိုး ခရီးထွက်နေရတာပါ။ တစ်ပတ် ငါးရက်ရှိရင် သုံးရက်လောက်က လမ်းပေါ်မှာ။ မကြာခဏ ရုံးပိတ်ရက်နှစ်ရက်တောင် မနားရဘူး။ ကျွန်တော် ခရီးထွက်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ် လူသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတယ် နေရာဒေသ အစုံရောက်တယ် ဆိုတော့လေ။ စကားပြောလည်းကြွယ်ရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် နည်းနည်း ပင်ပန်းတာကလွဲလို့။ ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းတွေကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တာ ကျွမ်းကျင်တော့ ဌာနေအရောင်းကိုယ်စား လှယ်အဖြစ်တက်လှမ်းတာ သိပ်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဗျ။
ကျွန်တော် ရန်ကုန်နှင့် ပဲခူးတိုင်းအတွက် နှစ်နည်းနည်းလောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီးနောက်မှာမှ မန္တလေး၊မြစ်ကြီးနားနဲ့လားရှိုးမြို့တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် လုပ်ကွက်သစ်တွေအဖြစ်ရောက်လာခဲ့တာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေကို တာဝန်ယူရချိန်မှာတော့ တော်တော့်ကို ကြိုးစားခဲ့ရတာပါပဲ အရောင်းစွံဖို့ကိုလေ။ တစ်ရွာရွာမှာ ဆေးဆိုင်ရှိဖို့ဆိုတာ နည်းနည်းလေးခြားတယ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြေတိုအောင်သွား ပါးစပ်အမြုပ်ထွက်မတတ်ပြောပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ရရော။ နေရာဒေသအများအပြားသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရပေမယ့် ကျွန်တော် အခြေစိုက်နေထိုင်တာက ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်သော လူဦးရေများပြားလာသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ့နော်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က အရွယ်ရောက်ပြီး ဂေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုင်းက သိကြပါတယ်။ အဲ….လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကျော်လောက်က အသက် ၂၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသူတို့ကိုဖွင့်ပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်က မိန်းမပုံ သဏ္ဌာန်ပေါက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ဖြောင့်စင်းနက်မှောင်နေတဲ့ ဆံနွယ်တွေ၊ ရွှန်းစိုတောက်ပ နေတဲ့ မျက်နက်ဝန်းတွေ၊ အားကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်ဟန်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုသာ မိန်းကလေး တွေက မဆွတ်ခင်ကညွှတ်ချင်နေကြတာပါလေ။ တစ်ပတ်ကို ၄ ၅ကြိမ်ကတော့ Gym ကိုသွားပြီးကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်အောင်ကစားတယ်။ အင်း…. ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့မှ Relationship တစ်ခုတည်ဆောက်လို့မဖြစ်ပါဘူး သဘောင်္သား တွေလိုပဲလေ ခရီးအမြဲလိုလိုထွက်နေရတာကိုး။ သွားဖြစ်တဲ့ ခရီးစဉ်ဒေသတွေမှာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီကတော့ရှိပါရဲ့။ အမြဲလိုလို ဟိုတယ်တွေမှာ မတည်းဖြစ်တာသူတို့ကျေးဇူးတွေလည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အိပ်ယာကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဆိုသူ တွေက အမြဲလိုရှိပြီးသားဗျ။ အခြားစိတ်ကျေနပ်စရာလေးတွေနဲ့လည်း တစ်ခါတလေ သာယာဖြစ်ပါတယ်။
အခုရောက်နေတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုရဲ့ အရှေ့ဘက်ပိုင်းဒေသကိုတော့ ကျွန်တော်တကယ်မရောက်ဖူးဘူးတာကြောင့် အသိလည်းမရှိ တည်းဖို့နေရာလည်း သိပ်မသိသေးဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဗျူးပွိုင့်ရှိတာတွေဘက်က ဟိုတယ်တွေကတော့ တကယ်ဈေးကြီးတာကြောင့် အဝေးပြေးလမ်းမနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ ပြီးတော့ ခပ်သေးသေး ဈေးချိုချိုနဲ့ စားသောက်ဖို့လည်းသိပ်မပူရတဲ့ တည်ခိုခန်းလေးတွေကိုမေးမြန်း စူးစမ်းရှာဖွေလိုက်ပါရဲ့။ `၀ိုး……တကယ်လှတဲ့ အဆောက်အဦးလေးပဲ´ တည်ဆောက်ထားပုံထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတဲ့ တည်ခိုခန်းလေးတစ်ခုကို ကားဂိတ်ကညွှန်းဆိုလိုက်တဲ့သူကျေးဇူးနဲ့ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ပါတယ် သိပ်မကြာပါဘူးရှာရတာ။ အဓိက ၀င်ပေါက်ကနေ ၀င်သွားပြီး အခန်းကိစ္စစုံစမ်းလိုက်တော့ မန်နေဂျာက တစ်ယောက်အိပ်အခန်းတစ်ခန်းကို အဆင်ပြေပြေပဲလိုက်ပြပါတယ်။ အိပ်ခန်း ခပ်ကျယ်ကျယ်၊ ရေချိုးခန်းသန့်သန့်ရှင်းရှင်း မီးဖိုခန်းအသေးစားလေးလည်းပါသေးတယ်ဗျ။ အဆင်ပြေလိုက်တာ ဒီအခန်းပဲယူ မယ်ဆိုပြီး အခန်းယူဖို့ကောင်တာရှိရာကိုပြန်သွားပြီး မှတ်ပုံတင်တွေပေး တည်းခိုမည့်ရက်၊ အခန်းခစတာလေးတွေလုပ်ရတာပေါ့။ အားလုံး ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကားကို ကားပါကင်မှာ နေရာတကျရပ်၊ အ၀တ်အိတ်တွေကို သယ်ပိုးပြီးအခန်းရှိရာကို သွက်သွက်ပဲလှမ်းလာဖြစ်တယ် အရမ်းပင်ပန်းနေပြီလေဗျာ။ အထုပ်အပိုးတွေကို အ၀တ်ဘီရိုတွေထဲထည့် ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်တွေကိုမြန်မြန်ချွတ် အ၀တ်ချိတ်နဲချိတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခပ်သွက်သွက်ဝင်လိုက်ကာ ရေခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ အညောင်းအညာပြေစိမ်ချိုးပစ်လိုက်တယ်။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွား ပြီဆိုတာနဲ့ တည်းခိုခန်းလေးရဲ့ မျက်စောင်းထိုးက စားသောက်ဆိုင်ကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရင်း ညစာစားသောက်လိုက်တယ်။ ဒေသထွက် အသီးအနှံ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းလျာအချို့နဲ့ထမင်းမြိန်ခဲ့ပါရော။ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်ဝယ် ဟိုလှိမ့် ဒီလှိမ့်နဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပျင်းလာတော့ Note III လေးကိုကောက်ကိုင် အင်တာနက်လိုင်းလေးဖွင့်ပြီး ဒိတ်တင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမွှေ အခုရောက် နေတဲ့နေရာဒေသ၀န်းကျင်မှာ ဘယ်သူရှိလဲ ဘယ်သူနဲ့ဒိတ်ရင်အဆင်ပြေမလဲရှာရတာပေါ့နော်။ ဟူး….နယ်မြို့ဆိုတော့ ရှာရတာခက်ပါတယ် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကများ ကျွန်တော့်လိုအားယားနေမှာပါလိမ့်။
အခုတော့ ၁၀း၀၀ နာရီလည်းထိုးပြီ၊ အပြင်မှာတော်တော့်ကိုမှောင်လည်းမှောင်နေပြီဗျ။ အိပ်ယာပေါ်ဝယ် အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီမ၀တ် ခြေထောက် မှာလည်း ဘာမှမကပ် အတွင်းခံဘောင်းဘီခပ်ပါးပါးနဲ့လှည်းအိပ်နေလိုက်တယ်။ နံဘေးမှာလည်း မဂ္ဂဇင်းတွေပုံလို့ဟိုဟိုသည်သည်လှန်လှော ဖတ်ထားတာ။ Note III လေးကိုကိုင် ဟိုသည်ကြည့်ပြီး စကားပြောလို့အဆင်ပြေမယ့်သူကို ရှာကြည့်နေတုန်း တံခါးရွက်ကို တဒုန်းဒုန်းထု ရိုက်သံနဲ့အတူ အမိန့်သံဆန်ဆန် အသံတစ်သံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက်သွက်ပြန်အော်လိုက်ရတယ်။ `ခဏလေး…ခဏလေးစောင့်ပါခင်ဗျ´ ကုတင်ပေါ်က မဂ္ဂဇင်းတွေကို ခြေရင်းက အ၀တ်ဟောင်းထည့်တဲ့ခြင်းထဲပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်ကနေ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကိုဖိထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဘာကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းကိုလာတာလဲ ဘာစစ်ဆေးစရာရှိလို့လဲမသိဘူး မဟုတ်တာတစ်ခုမှလုပ်ထားတာမရှိတာတော့အမှန်။ ကျွန်တော် တံခါး ချောင်းကြည့်ပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်တယ် တကယ့်ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ပဲဗျာ။ သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လက်သီးဆုပ်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးကို လှမ်းထုနေတာကိုမြင်ရတယ်။ `လာပါပြီ ရဲအရာရှိကြီး…..အခုဖွင့်နေပြီနော်´လို့အသံပေးပြီး တံခါးဖွင့်လိုက်ပါရဲ့။
တံခါးလေးကို ခပ်ဟဟဖွင့်လိုက်မိတာ သူကအပြည့်ပွင့်အောင်သူ့ဖာသာတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာတယ်။ တံခါးရွက်တောင် ဗြန်းကနဲနံရံကိုရိုက်မိ မတတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ခပ်လန့်လန့်နဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်မိရကာ အ၀တ်မ၀တ်ထားတော့ မလုံခြုံသလိုရင်ထဲ စိုးရွံ့စိတ်ဝင်မိရော။ တော်တော်ထွားကြိုင်းတဲ့ ရဲကြီးပဲ အရပ်အမြင့်က ၆ပေကျော်လောက်တယ် ကျွန်တော့်ထက် သုံးလက်မလောက်တော့ပိုမြင့်မယ်ထင်တယ်။ အသက်အရွယ်ကလည်း ကျွန်တော့်ထက် နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပဲကြီးမယ်။ တုတ်ခိုင်သန်မာတဲ့ သူ့လက်မောင်းတွေ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ရင်အုပ်နဲ့ တောင့်တင်းလှတဲ့ ပေါင်တံတွေကို ၀တ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းတင်းတင်းရင်းရင်းကနေ မြင်နေရပါတယ်။ သေးကျဉ်တဲ့ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ ခါးပတ် က သပ်ရပ်နေသလို ၀တ်ထားတဲ့ရှူးဖိနပ်ကလည်း မှန်တောင်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်ရဲ့။ ကြယ်သီးတစ်လုံးဖြုတ်ထားလို့ တစ်စွန်းတစ်စထွက် နေတဲ့ ရင်ဘတ်အမွှေးနုလေးတွေက ဦးထုပ်အောက်က အသာလျှိုထွက်နေတဲ့ ဆံနွယ်တွေလိုပြူတစ်နေတာက ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ စူးရှ တောက်ပြောင်နေတဲ့ သူ့မျက်နက်ဝန်းတွေနဲ့အပြိုင် ချောမွေ့တဲ့ ကြေးနီရောင်အသားအရေကလည်း တကယ်မိုက်တယ်ဗျာ။
တုန်ရင်တာမဖြစ်အောင် အေးဆေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး `ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ဆရာ´
သူ့လည်ချောင်းထဲကလာတဲ့ အသံမျိုးနဲ့ `ဆေးဝါးကိစ္စ - လက်တွေကိုမြှောက် နံရံကိုမျက်နှာမူထား….အခု!!´
ကွန်ပလိန်းတက်ဖို့လည်းမရလိုက်….ကွန်ပလိန်းတက်ချိန်လည်းမရလိုက်ပါ။ သူ့ဖာသာသူဟိုသည်စမ်းသပ်တယ်လေ….ကျွန်တော်မှ ဘယ်လက်နက်ကိုမှသယ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိတာပဲ။ (လက်နက်တစ်ခုတော့ ကျွန်တော့်အတွင်းခံပေါင်ခွဆုံမှာရှိတယ်လေ….သူ့ကြည့်ရတာ အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကို သတိထားမိပုံပေါ်တယ်)။ လေသံကတော့ မာမာပဲ `ဟုတ်ပြီ….ဒါဆို ခင်ဗျား မှတ်ပုံတင်တို့ လိုင်စင်တို့ ကဒ်တစ်ခုခုပြ´ဆိုပဲ။
`အဲ…..ကျွန်တော့် ပိုက်ဆံအိတ်က အံဆွဲထဲမှာဆရာ… ကျွန်တော် ဆရာ့ကိုယူပေးလို့ရမလားဗျ´။ သူ ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ် ကျွန်တော်က ငြင်းဆန်မှုမရှိ အလိုက်တသင့်လုပ်ကိုင်ပေးတာကိုး။ ကျွန်တော် အံဆွဲရှိတဲ့ စားပွဲခုံပုလေးစီလမ်းလျှောက်သွားကာ ဆွဲဖွင့်ပြီး ကျွန်တော့် ပိုက်ဆံအိပ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ရင်း ကားဒရိုင်ဘာလိုင်စင်၊ လိပ်စာကဒ်နှင့် ကျွန်တော့်အိမ်နီးနားချင်း ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့လိပ်စာကဒ်ကိုပါ ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ သူ ကဒ်တွေအားလုံးကို သေချာကြည့်ပြီး ` အရင်က ဒီမှာအမြဲတည်းတာလား?´လို့မေးသဗျ။
ကျွန်တော်က မဟုတ်ကြောင်း အခုအကြိမ်ဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
` ဟာ..ကျွန်တော်တော့ အံ့သြတယ် မန်နေဂျာမိန်းမက သဘောကောင်းတဲ့ပုံပါမြင်ခဲ့ရတာတော့´´
ရဲအရာရှိပြောတာကတော့ ` သူက….သူနဲ့ သူ့ယောက်ျားက ဒီတည်းခိုခန်းကို ကောင်းကောင်းဖွင့်ချင်ကြတယ်ဗျ၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့်လေ။ ပြီးတော့ အမှုအခင်းမဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ် တခြားသူတွေ အော်ကြောလန်တဲ့အထိ၊ ကျုပ်တို့ကို သူအကြောင်းကြား တာနဲ့ အမြန်ပြေးလာခဲ့ရတာပဲ´တဲ့။
သူ့အိပ်ကပ်ထဲက စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်လိုက်တာမှာ ကျွန်တော်က `အဲ့စာရွက်ကိုကြည့်လို့ရမလားဗျ´လို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက ခပ်သွက်သွက်ပဲ ကျွန်တော့်စီ လှမ်းပေးတယ်ဗျ။ (သူပေးတဲ့စာရွက်က ရဲဌာနရဲ့ပုံစံကျစာရွက်တစ်ရွက်ပါပဲ၊ ခေါ်ဆိုတဲ့ နေရာအမည်၊ ခေါ်ဆိုရ ခြင်းအကြောင်းရင်း၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ယာဉ်နံပါတ်တွေအကုန်လုံးပါပဲ)။ စူးရှတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို အထက်အောက် စိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်မှ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်မကပ်ကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိထားမိရပါတယ်။ သူ့ရင်ထိုးတံဆိပ်ကို မျက်လုံးစွေကြည့်လိုက်တော့ ´B. ဘိုဘို´တဲ့။ ကျွန်တော် စာရွက်ကို ပြန်လည်လက်ကမ်းပေးလိုက်ရင်း သူ့မျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်စိုက် ကြည့်လိုက်ကာ ` အော်…ဒီကိစ္စလား….ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအားလုံး ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးပါ့မယ် ဆရာဘိုဘို´လို့ပြောလိုက်တယ်လေ။
သူက မပြုံးမရယ်အနေအထားနဲ့ `ခင်ဗျားလုပ်ရမှာ အသေအချာပေါ့´တဲ့။
အဲ….အချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ခေါင်းအုံးအောက်က တစ်စွန်းတစ်စထွက်နေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းနှစ်စောင်ကို သူမမြင်အောင် မသိမသာ စောင် ခေါက်သလိုလိုနဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ဆွဲဖုံးလိုက်တယ်။ ခရီးထွက်တိုင်း အိတ်တွေထဲ အလေးခံထည့် အားတဲ့အခါထုတ်ကြည့်ပြီး သွားရေကျရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းက လေးငါးစောင်လောက်ရှိတာ Oversea သွားတုန်းက၀ယ်ဝယ်လာခဲ့တာလေ။ အခု ခေါင်းအုံးအောက်မှာရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် အနက် တစ်စောင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးက ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတော်တော်လှတဲ့ ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အမျိုးမျိုးနဲ့အလှ ပြထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ဖြစ်ပြီး အခြားမဂ္ဂဇင်းကတော့ အပြာမဂ္ဂဇင်းသက်သက် လုံးဝန်းပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေ နောက်ကိုပစ်ထားတဲ့ ငနဲတစ်ပွေကို ဒင်ကြီးကြီးနောက်တစ်ပွေက အသားကုန်ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတန်ဆာဆင်ထားတာဗျ။ သူက ခပ်မြန်မြန်ပဲ ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး ခေါင်းအုံးအောက်က မဂ္ဂဇင်းနှစ်စောင်လုံးကို ဆွဲယူကြည့်လိုက်တယ်။
အစတော့ သူ့ကိုပြန်ပြောတဲ့စကားတွေက ထစ်ထစ်အအဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် မကြာခင် စိတ်ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီး အဆင်ပြေစွာပြောနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂေးဖြစ်နေတာနဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ မှုခင်းတစ်ရပ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလည်း အချို့ဝယ်လို့ရပြီဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေက ဒီက၀ယ်တာမှမဟုတ်တာ `ဟို….ကျွန်တော် ထိုင်းသွားတုန်းက၀ယ်လာခဲ့တာဗျ´
`ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေ ဘာတွေက ဒီတိုင်းပြည်မှာ တရားမ၀င်သေးဘူး၊ ခင်ဗျား သိုသိုသိပ်သိပ်သိမ်းထားတာမျိုးပဲကောင်းတယ် လောလောဆယ်´
သူ တစ်ခန်းလုံး ဟိုသည်ကြည့်လိုက်ရင်း ဆွဲငင်သံလိုက်လှိုင်းထနေတဲ့ အသံနဲ့ ` အားလုံးကြည့်ရတာတော့ အခြေအနေကောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျား အခန်းမှာပဲ အခုနေလိုက်ဦး၊ ထွက်သွားဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့ဦးနော်။ ကျုပ်တို့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုလုံး စစ်ကြည့်ပြီးမှ ခင်ဗျားစီပြန် လာမယ်၊ ဒီမြို့က ကျုပ်တို့ဥပဒေကြောင်းရာတွေက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ လာရှင်းပြမယ်ဗျာ…´တဲ့ပြောတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကားဒရိုင်ဘာ လိုင်စင်၊ သူငယ်ချင်းရဲအရာရှိရဲ့ လိပ်စာကဒ်တွေကို ပြန်လှမ်းပေးပြီးနောက် ကျွန်တော့်အလုပ်လိပ်စာကဒ်ကိုတော့ သူ့အိပ်ကပ်ထဲထည့် သွားတယ်။ `ကျုပ် ဒီကဒ်ကိုတော့ ခဏယူထားဦးမှဖြစ်မယ်´ဆိုပဲ။ သူ အခန်းဝကိုပြန်လှည့်သွားပြီး တံခါးကိုအသာပြန်ပိတ်သွားပေးတယ်ဗျ။ အခန်းဝမီးရောင်မသည်းမကွဲနဲ့မြင်လိုက်ရတာက တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ သူ့တင်သားတွေဟာ ယူနီဖောင်းနဲ့အတူ ကခုန်သွားတာများ ရင်ခုန်ဖို့ အကောင်းသား။
သူသွားတော့လည်း ကျွန်တော်တံခါးကို chain – locked လုပ်လိုက်ပြီး အချိန်အတော်ကြာတံခါးကိုမှီ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်နေမိပါတယ်။ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင်ကြုံဆုံရတဲ့အဖြစ် ပြီးတော့ မဂ္ဂဇင်းတွေမြင်ပြီး ပြောသွားတဲ့မှတ်ချက်များ၊ ဒေသတွင်းဥပေဒေကြောင်း ရာတွေကိုပြန်လာရှင်းပြဦးမယ်ဆိုတာတွေကို စဉ်းစားမိရပြီး နည်းနည်းတော့ အာရုံထွေပြားသွားရပါရဲ့။ သူဘာအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပြောသွား ပါလိမ့်။ ပြဿနာရှာလာရင်ကော ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားခက်ရပြီ။ ဟူး….ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနဲ့ တောင့်တင်းသန်မာသော သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်၊ တုတ်ခိုင်သန်မာသော သူ့လက်အစုံနဲ့ အ၀တ်မဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွတ်သပ်သွားပုံ၊ ပြီးတော့ မဂ္ဂဇင်းတွေက တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါသတဲ့၊ ပြီးတော့ ညှို့မျက်ဝန်းနဲ့အတူ နှုတ်ဆက်သွားဟန်က သူပြန်လာမှာကိုစောင့်နေခိုင်းသလားပဲဗျာ။
အချိန်အကြာကြီးမစောင့်လိုက်ရပါဘူး တစ်နာရီလောက်အကြာမှာသူပြန်လာပါတယ်။ တံခါးကိုအကြောင်းပြချက်ရှိရှိခေါက်ပြီပေါ့ဒီတစ်ခါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်စဉ်မတော့မြင်လိုက်ရတာက ဧည့်လက်ခံကောင်တာရဲ့အပြင်ဘက်မှာ ရဲကားရပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းမှာ လူလေးယောက်လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ထိုင်နေတာကိုပါ။ မန်နေဂျာအမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး ကြည့်ရတာသူ့ယောက်ျားဖြစ်ဟန်တူသူ တို့မျက်နှာတွေမှာ အပြုံးတဝေေ၀နဲ့ အခြားရဲဝန်ထမ်းများနဲ့စကားပြောနေတာလည်းမြင်ရတယ်။
တံခါးကိုအသာဟကာဖွင့်ပေးစဉ်မှာပဲ သူအတွင်းကို အတင်းတိုးဝင်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ထွားကြိုင်းသန်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အားအင်က ကျွန်တော့် ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံစရာမလိုလောက်အောင်စွမ်းတယ်နဲ့တူရဲ့။ တော်တော်ဟုတ်တဲ့ရဲအရာရှိပါပဲ….ကျွန်တော်သူ့ကို`ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ လဲ…ဆရာဘို´လို့အမေးထုတ်ရင်း တံခါးကိုပိတ်လော့ခ်ျချလိုက်တယ် နှစ်ဦးသား သီးသန့်စကားပြောဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရအောင်ပြန်လှည့်လာပြီး ခပ်အုပ်အုပ်လေသံနဲ့ ` ကျုပ်ကို ဘိုဘိုလို့ပဲခေါ်ပါ၊ နှစ်ယောက်ကတော့ သိပြီးသား ပြည့်တန်ဆာ၊ တစ်ယောက်က ပိုက်ဆံသိန်း၁၅၀လောက် သော့ပေါင်းစုံနဲ့ကိရိယာတွေကိုသူ့ကားထဲမှာတွေ့လို့..ပြီးတော့ခင်ဗျား´ပြော တယ်။ ကျွန်တော်က အံ့အားတသင့်နဲ့သူ့အနားကပ်သွားတော့….သန်မာသော ရှည်လျားသော သူ့လက်များနဲ့ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဖက်လိုက် ပါရဲ့။ အ၀တ်မဲ့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဖောင်းကြွနေသော သူ့ရင်အုပ်များနဲ့ပူးကပ်သွားပြီးသကာလ သူ့နှုတ်ခမ်း ခပ်ထူထူတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို တပ်မက်မွတ်သိပ်စွာ ခပ်ပြင်းပြင်းနမ်းရှုံ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် နည်းနည်းနောက်ကိုယိုင်သွားမိပါတယ်….ဘယ်လိုမှမမျှော်မှန်းထားမိဘူးလေ…ဒါပေမဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့အရာပဲလေ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ကို တစ်ဆင့်နိမ့်ဆက်ဆံလိုက်တာ။ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းထဲကို ရုတ်တရက်ရောက်လာတယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့တုတ်ခိုင်သန်မာတဲ့ လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုရစ်ပတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးက မြန်မှမြန်။ ရုန်းကန်ကြည့်တာမှာ သူ့လက်မောင်းတွေ ရဲ့ဖက်တွယ်မှုက တကယ့်အားအပြည့်၊ပြီးတော့ သူ့ရဲ့တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးပူးကပ်သွားတာ နှစ်လက်မ လောက်ပဲကွာမယ်။ မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီသားက ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကိုပွတ်သပ်နေတာ ကြမ်းရှရှ…အာ… ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ဘာဖြစ်လာမှန်းမသိတော့ဘူး….တောင့်တင်းသောပေါင်တံတွေကြားရောက်နေသော ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကလည်း ညှပ်နေတာ ပေါင်မုန့်သားနှစ်ဖက်ကြားညှပ်နေတဲ့ အသားလွှာလိုဖြစ်နေရော။ သူ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကြား ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေသော သေနတ်ပါ ခါးပတ်ကိုဆွဲဖြုတ်တယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်က၀တ်ထားသော ယူနီဖောင်းဂျက်ကက်….ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ အတွင်းက အနက်ရောင်ယူနီဖောင်းရှပ်ကြယ်သီးတွေကို အလိုလိုလိုက်ဖြုတ်ပေးနေမိသားပါ။ ကျွန်တော်လက်တွေဟာ တုံ့နှေးနေပေမယ့် သူ့ခန္ဓာကိုယ် အ၀တ်မဲ့သွားသောဖြစ်စဉ်ကိုအမြန်ကြည့်မြင်ချင်စိတ်တွေက ရင်ခုန်နှုန်းနဲ့အတူရှေ့ကိုရောက်နေရော။ တောင့်တင်းပြီး သန်မာအချိုးကျလှတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ရင်အုပ်က အမွှေးနုတွေ သူ့ဆံနွယ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကို မရိုးမရွဖြစ်စေပါပြီ။
အောက်ပိုင်း ဘောင်းဘီရှည်ခပ်လျောလျောအောက်ကျလာစဉ်ပေါ်လာတာက boxer ဘောင်းဘီတိုပွပွ….အိုး….သူ့ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက် ပုံဟာ ကျွန်တော်ကြည့်နေကျ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲက porn star တစ်ယောက်နဲ့တောင်တူနေသေးတော့။ သူ့အတွင်းဘောင်းဘီ ခါးစပ်ကနေ အပေါ်အကျ င်္ီကိုဆွဲမချွတ်လိုက်တဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်တော့်သွားတွေစေ့သွားမိအောင် ခံစားရစေတဲ့ ပန်းသွေး ရောင်ထနေသော နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ ရင်အုပ်က အမွှေးနုတွေကြားရှင်းကနဲပေါ်လာပါတယ်။ တောင်တန်းတွေကြားက ရုတ်တရက် ပေါ်လာတတ်တဲ့ အညိုရောင် ၀က်ဝံကြီးတစ်ကောင် လူသားအသွင်ဖန်ဆင်းထားသလားပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ သူ့ကျောပြင် အနှံ့ပွတ်သပ်မိသလို ကျွန်တော့်ရင်အုပ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေထိကပ်ပွတ်သပ်မိတာက ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကနေ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့ အသံတွေ အော်ညည်းထွက်လာတော့မတတ်ဖြစ်တည်လာရပါတယ်။
ကျွန်တော် အနည်းငယ်တွန့်လိုက်မိပြီးနောက် သူ့ကို အိပ်ယာပေါ်သို့တွန်းလှဲလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုပစ်ကျ သွားရတာပေါ့လေ သိပ်မသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ထက် ပေါင်၅၀လောက်ပိုနိုင်တဲ့ ကြွက်သားအပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါ။ သူက သဘောတကျနဲ့ ခပ်တိုးတိုး စကားဆိုတယ် `ခင်ဗျားက ကြည့်ရတာ သန်သားပဲ´တဲ့။
ကျွန်တော်သူ့ကို မချိုမချဉ်ပြုံးကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကိုနမ်းပစ်လိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေဟာ သူ့နှုတ်ခမ်း တွေကိုသာမက ကြွက်သားမြှောင်းတွေထနေတဲ့ သူ့လည်တိုင်နဲ့ လည်မျိုအနှံ့ ခရီးထွက်ပစ်တယ်။ ရင်ခုန်တိန်းမူးစရာ ကိုယ်သင်းနံ့နှင့် အတူ ရင်အုပ်ကြီးနှစ်ခုကြားက အမွှေးနုလေးတွေကိုလည်း နှာခေါင်းနဲ့တိုးဝှေ့လိုက်ရဲ့။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်အနမ်းခရီးစဉ်ဟာ ပန်းသွေးရောင် နို့သီးခေါင်းလေးစီဝယ် ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားနဲ့ တင့်တယ်နေတဲ့သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ ရင်အုပ်တွေပေါ်ဝယ် ဂုဏ် ယူစွာပေါ်ထွက်နေတော့ ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေးကို ထိပ်ဖျားလေးချွန်ကာ မုန်တိုင်းမွှေဖို့ပြင်ဆင်တော့တာပေါ့နော်။ သူ့ရင်အုပ်အမွှေးနုလေး တွေဟာ အန်စာတုံးလိုစီနေသော ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ဖြတ်သန်းကာ ခါးပတ်ခေါင်းရဲ့အစပိုင်းနားမှာ အဆုံးသတ်နေတယ်။ တင်းရင်းနေတဲ့ သားရေခါးပတ်ခေါင်းဟာ ပုံစံကျနလှတဲ့ ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီကိုချပ်ရပ်နေစေတော့ အောက်နားတည့်တည့်က အဖုအဖောင်းကြီးကိုမြင်ရ တာများ တကယ့်ရင်ထိတ်စဖွယ်ပါပဲ။ ထွားကြိုင်းသန်မာလွန်းတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ တော်တော်ထွားတဲ့အမျိုးသားအင်္ဂါစပ်ကိုမြင်နေရ တာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုရရှိပါတယ်။
သူ့သားရေခါးပတ်ကို အသာဖြုတ်ပြီးတော့ ဘောင်းဘီဇစ်ခေါင်းတလျှောက်ကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ ပွတ်သပ်လျက်ပြုမိပါတယ်…မွှေးပျံ့တဲ့ ရေချိုး ဆပ်ပြာရည်အနံ့နဲ့အတူ သားရေ polish တိုက်တဲ့ဆီရဲ့အနံ့လေးတွေက မရိုးမရွဖြစ်စေပါရော။ တခြားသူတွေရဲ့ ချွေးနံ့ကတော့မသိဘူး သူ့ချွေးနံ့ကတော့ တကယ့်ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ ယောက်ျားအနံ့ပြောရမလား တကယ်မိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘာမှမလုပ်မိဘဲ ခဏတော့ ငြိမ်သက်နေမိပြီး သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို နှစ်လိုလက်ရ သာယာမိပါရဲ့။ သူ့ခါးပတ်ခေါင်းလေး ကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူ့ကိုထိတွေ့ပိုင်ခွင့်ရနေမယ်….သူ့အတွင်းခံလေးဖြစ်ချင်တာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပူနွေးသာယာဖွယ်အထိအတွေ့ကိုရနေမယ် … လမ်းလျှောက်….အပြေးအလွှား….ထိုင်နေနေ….မတ်တပ်ရပ်နေနေ….ဟဲဟဲ တကယ့်ငထွားကြီးက ကျွန်တော့်အောက်နားမှာ တထိထိဖြစ် နေမှာမဟုတ်လားလေ။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာဖျားလေးတွေနှင့်အတူ ဟနေတဲ့ဇစ်ကြားက မာတောင့်နေတဲ့ အရာကြီးကို ပွတ်သပ်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းကြီးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သွားလေးနဲ့လည်းဖွဖွကိုက်မိတော့ မျှော့ကြိုးကြားကနေ ဟပြီးချောင်းကြည့်လာတာများ တကယ် အလန့်ဇယားပါ။ ထိပ်ဖျားလေးက နည်းနည်းများ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာသလားမသိ ဘောင်းဘီမှာထင်းလာတယ် ကျွန်တော့် လျှာဖျားကစွန်းသွားတဲ့သွားရည်တွေမဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။ အခုထက်ထိ ဘောင်းဘီတွေကိုအဆုံးထိမချွတ်မိသေးပေမဲ့ ဒုတိယပန်းတိုင် က သူ့ရဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ စီးထားစဲ အနက်ရောင်boots ဖိနပ်တွေကိုပေါ့။
သူဆိုင်ကယ်စီးလာတာ မတွေ့မကြားပေမဲ့ ရဲတွေအတော်များများက ဒီလို ဘွတ်ဖိနပ်တွေကိုဝတ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်နေကျပါပဲ။ သူ့ခြေထောက် ခပ်ထွားထွားတွေကိုဝတ်ထားတဲ့ ဘိနပ်ကြီးကလည်း ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားကြီးဗျာ ဒါကြီးနဲ့များ ကန်ထုတ်လိုက်ရင် မလွယ်ကြော။ တစ်နေကုန် ချွေးရွှဲသည့်လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ဖုန်အနည်းငယ်နဲ့ အနံ့အသက်အချို့ကိုတော့ရနေတာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် သန်မာသော တောင့်တင်းသော ခြေအစုံကနေ boots ဖိနပ်တွေကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ အသာကုန်းပြီးဆွဲချွတ်နေစဉ်မှာ သူကထထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ချိုင်းကနေမထူပြီး သူရှိရာစီဆွဲခေါ်လိုက်ရာ သူ့ပေါ်ကျွန်တော်မှောက်လျက်ကျသွားရော။ သူ တခြား အစီအစဉ်ရှိနေခဲ့ပုံပါပဲ။
သူက ကျွန်တော့်ကိုဖက်ရင်းတစ်ဖက်ကိုလှိမ့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ကပက်လက်အနေအထားနဲ့သူ့ရဲ့ဒူးတွေကြားရောက်သွားရော။ သူ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီတွေ၊ အပေါ်ယံအ၀တ်တွေအကုန်သူဆွဲချွတ်ပစ်တော့ အဖြူရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီပါမကျန် လျှပ် တစ်ပြက်အတွင်းမှာ ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ သူ ခုတင်ခြေရင်းကိုဆင်းပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကို ကုတင်ဘေးက အ၀တ်စင်ပေါ်ကို ပစ်တင်လိုက်တယ်ဗျ။ ပြီးတော့ အ၀တ်မပါသော ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်းကနဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက ငပဲကို သူ အကြည့်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ကြည့်တယ်။ အဲ့တာလည်းပြီးရော သူ့ခြေအိတ်တွေကို ဆွဲချွတ် သူ့ခါးက ဘောင်းဘီလက်ကျန်ကိုပါဆွဲချွတ်ဖို့သူ လုပ်ပါရော။ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကိုတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုဆွဲချလာလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ ငပဲကြီးဟာ ငေါက်ကနဲပေါ်ထွက်လာပြီး တစ်ဖက်ရန်သူကို ပစ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ အမြှောက်ကြီးလိုချိန်ရွယ်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ် တွေတစ်စမှမရှိတော့ပါဘူး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် body show ပြနေကြတယ် ဟဲဟဲ။
ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ ခုတင်ခြေရင်းမှာမတ်တပ်ရပ်နေသော ကိုကိုရဲကြီးရဲ့ရှေ့ကြမ်းပြင်ဝယ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ မြင်ဖူးသမျှထဲ အထွားဆုံးဖြစ်တဲ့ အမြှောက်တံကြီးကိုလက်အစုံနဲ့စွန့်စားကိုင်တွယ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုင်ထားတဲ့ငပဲကြီးက အပြည့်အ၀တော့မမာသေးဘူး ဒါပေမဲ့ တကယ့်ကိုထွားနေပြီဗျ။ တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့ ဘာမှဆက်မလုပ်ငြိမ်သက်ကာ အသက်ရှူနေမိပါရဲ့။ `အရင်က ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် မတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာနာတယ်ဗျာ´
သူ ကျွန်တော့်ကိုငုံကြည့်ပြီးပြုံးပြကာ `အဲဒါကြီးကလှတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဆက်ပြီးအရသာခံကြည့်စမ်းကွာ…ဘယ်သူမှာဝင်မလာနိုင် သေးပါဘူး။ ညဦးပိုင်းက မင်းအခန်းကို ကျုပ်ဝင်လာကတည်းက ဒါကိုငေးပြီးလိုချင်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ကျုပ်ကလည်း မင်းလို လူချောလေးကို ခဏပိုင်ချင်နေတာကွ´တဲ့ပြောတယ်။
သူ့ပေါင်ခွဆုံက ငပဲကြီးက ရှည်လည်းရှည် တုတ်လည်းတုတ်တယ်ဆိုတော့ လက်နဲ့ကိုင်ရတာမှာလက်ထဲပြည့်နေသလိုခံစားရပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း တကယ့်သံခမောက်ကြီးနဲ့တူနေတယ်။ လက်အစုံထဲသွေးတိုးနေတဲ့ ငပဲကြီးရဲ့ထိပ်ကို လျှာဖျားလေးနဲ့သွေးတိုး စမ်းလိုက်တော့ နည်းနည်းငံသည့်အရသာနဲ့အရည်ကြည်အချို့ကို အရသာခံစားမိရပါရော။ ငပဲထိပ်ပိုင်းလေးကို လျှာလေးနဲ့ရစ်ဝိုင်းလိုက် ပေါင်တံတွေကို လက်တွေနဲ့ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်…..နောက်တော့ လျှာကိုအပြားလိုက်ထားကာ လိင်တံတလျှောက်နဲ့အတူ လုံးဝန်းကြီးမား သော ရွှေဥတွေကိုပါ အသွားအပြန် Lollipop လိုပြုစုပေးမိတော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံသဲ့သဲ့ထွက်လာတယ်ဗျ။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော် စွမ်းသမျှ အတွေ့အကြုံ Feedback တွေမေးပြီးလေ့လာလိုက်စားခဲ့တာ အသုံးချခွင့်ကြုံဆုံလာတုန်းသုံးပစ်လိုက်ရမှာပေါ့။ ဒီလူဝံကြီးဘယ် လောက်စွမ်းသလဲ လေ့လာဖို့အစပျိုးရမယ်။
သူ့နှုတ်ဖျားက ပွစိပွစိနဲ့ ` လာစမ်းကွာ….ဒီညတော့ မင်း….မြင်းတစ်ကောင်လိုတက်ခုန်ရပြီမှတ်´တဲ့လန့်စရာပါလားနော်။
လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် သူမာန်ပါလာတယ်ဗျာ….ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ငပဲကြီးကို ကျွန်တော့် အာခံတွင်းထဲ အထုတ်အသွင်းသွက်သွက်လက်လက်ကိုလှုပ်ရှားတော့တာပါ။ တစ်ခါတစ်ခါများ သူ့ဆီးစပ်က အမွှေးနုတွေနဲ့ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းတွေထိကပ်သွားတဲ့အထိ သီးတောင်သီးမိရပါတယ်။ နည်းနည်းလေး အရှိန်လျော့ချိန်မှ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းပွတ်သပ်…..အမွှေးနုလေးတွေရှိတဲ့ပေါင်တံတွေကိုဖျစ်ညှစ်….အာ….တင်းပြီးဖောင်းနေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို အသာညှစ်ပေါ့။ ငပဲကိုကိုင်ထားသောလက်တစ်ဖက်က တံတွေးများနဲ့ချောနေပြန်တော့ အဲတာကိုအခွင့်ကောင်းယူကာ သူ့တင်သားဆိုင် တောင်ကြားလမ်းထဲက ခရေဂူဝကို အသာဖိဖိပြီးလက်ခလယ်ကိုသွင်းကြည့်ပါတယ်။ အမွှေးနုလေးတွေရှိပေမယ့် အသာစမ်းစမ်းပြီးကစား ရတာပေါ့လေ။ လက်ချောင်းလေးနဲ့ကလိလိုက် ထိုးသွင်းလိုက် ခဏခဏလုပ်ပြီးနောက်မှာမှ အဆင်ပြေပြေ လက်ချောင်းလေးတွေ ၀င်သွားတယ်။
သူ့ဦးခေါင်းကို နောက်ကိုမော့ ပါးစပ်က တရှီးရှီးဖြစ်လာကာ ရှေ့ကငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်းသွက်သလို တင်ပါးတွေကို နောက်ပြန်ကစားပြီး လက်ချောင်းတွေကို တင်သားဆိုင်တွေထဲမြုပ်မြုပ်သွားအောင်ကစားတော့တယ်။ `အိုး….အိုးး….အာ….ဒီညတော့ ကျုပ်တို့ ကောင်းပြီပေါ့´လို့ အာလုပ်သံကြီးနဲ့ပြောရဲ့လေ။ သုံးလေးကြိမ်လောက်ပြောခဲ့သလိုကစားပြီးနောက်မှာတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကာ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက် -ုလိုက်ပြီးနောက် `OOOOWWWRRRAAAHHH!´ ဆိုပြီးတော့ ပျစ်ချွဲသော စိုစွတ်စေသော သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် ၊ ဆံနွယ်တွေပေါ် ဖွင့်ဟထားစဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ…..ကျွန်တော့်ရင်အုပ် တွေ…..ပခုံးတွေပေါ်ကို ၆ လျော့ ၇လျော့လောက်ပန်းထုတ်တယ် ဘယ်တွေရောက်ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိအောင်ပါပဲ။
သူကျွန်တော့်ကို ပခုံးကနေမပြီး ခုတင်စောင်းမှာထိုင်စေလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပေါင်နှစ်ဖက်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တပ်မက်စွာ မွတ်သိပ်စွာ ပြန်နမ်းပြန်ရော။ ရိတ်သင်ထားလို့ ပြန်ထွက်စပြုနေတဲ့ သူ့မုတ်ဆိပ်မွှေးအချို့ဟာ ကျွန်တော့်အရေပြားကို နမ်းရှိုက်နေတာများ ကျွန်တော့်အသားဆိုင်တွေ သွေးကြောတွေကိုနှိုးဆွနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သူ ကျွန်တော့်လည်တိုင် တွေ….ရင်အုပ်တွေကိုလည်း အနမ်းချွေတယ်….ပြီးတော့ စိုစွတ်နေဆဲ့ သူ့သုက်ရည်တွေကိုသူ လျာနဲ့ပြန်လျက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံထဲ သူ့လျာကြီးကိုပြန်ထိုးထည့်ပေးပြန်ရော။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်က မာတောင့်စပြုတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူ့ပါးပြင်နဲ့ ပွတ်သပ်ပြန်တော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ထလာပါတယ် မတ်ကနဲပါ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားကလည်း မထိန်းနိုင်စွာ ညည်းညူမိပြီပေါ့နော်။ ‘OOOhhh….ကောင်းလိုက်တာဗျာ´
ကျွန်တော့်ကိုမော့ကြည့်ပြီး သူပြုံးလိုက်ကာ `ကြိုက်တယ်ဟုတ်? သိပ်ကြမ်းတမ်းနေတယ်လို့မထင်ဘူးလား မင်းအတွက်လေ’
သူ့ကိုပြန်ငုံကြည့်ပြီးပြောမိတာက `ကျွန်တော့်အနားမှာ တကယ့်ယောက်ျားစစ်စစ်တစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ဖီလင်ကိုသဘောကျပါတယ်´လို့။
သူ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ချို့ပေါ်လာတယ် ကျွန်တော့်အပြောမှာသူသဘောကျသွားတယ်ထင်ရဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကငပဲကို သူစတင်စူးစမ်းပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းက တကယ်တော့မသေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့မတရားထွားတဲ့ငပဲဆိုဒ်ထက်စာရင်တော့ သေးတယ်ထင်ရတာပေါ့လေ။ အို….သူ ကားပြီးထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကြားဝင်ထိုင်တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်ကာ ကျွန်တော်သူ့ကိုစလုပ်ပေးသလိုပဲ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးရဲ့ထိပ်ကို လျှာဖျားလေးနဲ့လျက်ပြုတော့တာပါ။ အာ…သူ့လျှာကြမ်းကြမ်းတွေက ကျွန်တော့်အသားနုကိုရစ်ပြီးကစားနေတာ ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်ပါပဲခဲ့စားရတာ။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ငုံစုပ်နေရာကနေ ရုတ်တရက် သူ့လည်မျိုထဲရောက်လောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ခုလုံးမျိုချပစ်လိုက်တယ်။ အိုးမိုင်ဂေါ့……ဘယ်လိုဖီလင်မျိုးကိုသူပေးစွမ်းနေပါလိမ့်… သူ့ပါးစပ်ထဲတဆုံးထည့်ထားတာမှာ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေပါ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေထဲမြုပ်တော့မတတ်ပါ။ သူ့ပါးစပ်ကိုဘယ်လိုကစားနေမှန်းကို မသိတာပါဗျာ ဖုန်စုပ်စက်တစ်လုံးက ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းတွေသန့်ရှင်းသွားအောင်ဖုန်မှုန့်တွေကိုစုပ်မျိုနေသလိုမျိုးထင်ပါတယ် ပြောပြရရင်။ သူ ခဏနာတော့ အသက်ရှူလိုက်သေးတယ်။ ပြီးနောက် ပါးစပ်ကလည်းလှုပ်ရှား ကြမ်းရှရှသူ့လက်အစုံက ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကို ပွတ်သပ်ကစားတာ ကြက်သီးတောင်ထရော။ ဟိုး….ဟိုး…ဟိုး….ကျွန်တော့်သွေးကြောတွေ တဆတ်ဆတ်ခါအောင်သူလုပ်နိုင်တယ်ဆို တော့ အတွေ့အကြုံကမသေးဘူးဘဲ။ လက်အစုံကိုလည်းလိုသလိုကစား လျှာတွေနှုတ်ခမ်းတွေနဲကလည်းငပဲကိုလိုသလိုထိန်းကျောင်းနိုင် တာလေ။ သူ့အာခံတွင်းထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုသွင်းထားတာများ အော့အံသလိုလည်းမဖြစ် သွားနဲ့လည်းမငြိ အိမ်မွေးခွေးငယ်လေးတွေ ဆော့စရာ ရာဘာအရုပ်လေးတွေကိုကိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာကစားနေတယ်ပေါ့နော်။
ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ တုန်ခါလာကာ…ခြေဖျားလေးတွေကော့ညွှတ်လာပြီးနောက် ဘယ်လိုမှာ မထိန်းနိုင်စွာ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ပန်းထည့်ပစ်မိလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းထဲမှာ သုက်ရည်တွေဘယ်လောက်များနေတယ်မပြောနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ အခုတော့ အပြာစာရေးဆရာတွေရေးတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ် `ကမ္ဘာမြေကြီးတုန်ခါသွားလောက်တဲ့ climax..´ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေ။
သူ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေအကုန်လုံး လျာနဲ့သရပ်ပြီးယူတယ် နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့စုပ်ပြီးယူတယ် စုဆောင်းတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကနေ သူ့ပါးစပ်ကိုခွာလိုက်ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကိုနမ်းပါတော့တယ်။ အနံ့တချို့ရတဲ့ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေကိုပဲ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ သူအကုန်ပြန်ထည့်တယ်ထင်ရပါရော။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်ဝယ်ပက်လက်လှဲလျောင်းမိပါတယ်…မောပန်းမှုတော့ မရှိသေးဘူး ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်သွေးကြောတွေ….အရိုးတွေ…..ကြွက်သားတွေဟာ တဆတ်ဆတ်များတုန်နေရသလားခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ အသက်ရှင်မိသမျှကာလပတ်လုံး တစ်ခါဖူးမျှ မခံစားဘူးသေးတဲ့ ဖီလင်မျိုးပါ။ ခပ်ထွားထွား တောင့်တင်းလှတဲ့ ရဲကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ကျွန်တော်သုက်ရည်တွေပန်းထည့်ခဲ့တာပါ။
သူ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားလေးတွေကိုအသာပွတ်သပ်ရင်းမှ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုလေထဲမြောက်အောင်ကွေးတင်စေလိုက်ပြီးနောက် မှာတော့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကို သူညှစ်ပြုလုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ မနာ့တနာလက်ဝါးလေးနဲ့တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ လျှာ ကြမ်းကြီးကို ခပ်ရှည်ရှည်ထုတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို စိုစွတ်မှုတွေပေးပါတော့တယ်။ မွှေတာ မွှေတာ….လျှာကြီးနဲ့မွှေတာ… နောက်တော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကို သူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ရင်း သူ့ငပဲကြီးကို ကျွန်တော့်ခရေ၀၀ယ်စမ်းသပ်တံခါးဖွင့်ပါရော။ အတွင်းထိ မရောက် အ၀လေးတွေကလိနေတာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရတော့တာအမှန်ပါ။ `အာ….ခင်ဗျား….ခင်ဗျား သိပ်မကလိပါ နဲ့ဗျာ´
ကျွန်တော် ခပ်သွက်သွက်ပြန်ထရပ်လိုက်ကာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ တစ်စွန်းတစ်စကျန်နေသေးတဲ့ boots ဖိနပ် ခြေချင်းဝတ်မှာကျန်သေးတဲ့ ဘောင်းဘီတွေနဲ့ တခြားအရာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး သူ့ငပဲကြီးကို ပိုမိုမာတောင့်အောင်ရယ် Lube ဆွတ်တဲ့သဘော ဖြစ်အောင်ရယ် ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ တဆုံးထည့်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက် လုပ်မိပြန်ပါရဲ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မှေးမှိတ်သွားသလို သူ့နှုတ်ခမ်း က မိန့်မူးသံတွေဟာလည်း ပိုမိုတက်ကြွလာတယ်လေ။ Wow…..သူ ကျွန်တော့်ကို မြောက်ကနေနဲနေအောင် ပွေ့ချီလိုက်ရင်း ခုတင်စွန်းပေါ် ကို ပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင် နေခိုင်းပြီးသကာလ သူ့ငပဲကို ကွန်ဒွန်ပါးပါးလေးတစ်ခုစွပ်လိုက်တယ်။ ထိပ်ပိုင်းလေးပဲပါတာဆိုတော့ အမေရိကန်စတိုင် ကွန်ဒုံးလေးများလား။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မှာ Lube ရှိလားမေးတာနဲ့ ခုတင်ဘေးက ခုံပုလေးအံဆွဲထဲမှာထည့်ထားတာကို ယူသုံးခိုင်းလိုက်ပါရဲ့။ အို…အ…..အ ဒီတစ်ခါ မာတောင့်နေတဲ့အပြင် အရမ်းထားနေတော့တာ…..သတိမထားဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေထည့် အသံမထွက်အောင်အံကြိတ်နေလိုက်ရတာ….အာ……ထိပ်ဝလေးကနေ တဖြည်းဖြည်း တစ်ရစ်ခြင်းဖိသွင်းတာ နောက်ဆုံးလျောသွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာ အသံကျယ်ကျယ်အော် လိုက်မိပါပြီ။
သူ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက် အများကြီး ညင်သာပါတယ်။ တကယ့်ကို slow motion လေးပါပဲ။ တစ်ချက်ခြင်းပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် တစ်ရစ်ခြင်းပြန်ဖိသွင်းလိုက်နဲ့ သူ့အားကိုအကုန်မသုံးဘဲ မိန့်မိန့်မူးမူးကိုရစ်နေတော့တာ။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုလည်းဒီထက်တော့ပိုကျယ် အောင်ဖြဲမပေးနိုင်တော့ဘူး….အိုးမိုင်ဂေါ့…..အို…ရင်ထဲကို ဟာကနဲဆင်းဆင်းသွားတယ်…..သူ့တင်ပါးတွေကို ဇကောဝိုင်းဝိုင်းသလိုလှုပ်ရှား လိုက် ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်လုပ်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကိုထိန်းကိုင်ထားတဲ့သူ့လက်တွေကိုသာ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားမိပါတယ်။ သူ့လည်မျိုကို ကျွန်တော်အညိုအမဲစွဲအောင် ခဲလိုက်တယ်…..သွားရာလေးလည်းပါသပေါ့…..နက်ဖြန်သူဒီကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲမသိ။ အဲဒါ သူ့ကိစ္စပါလေ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာဘဲ။ အိမ်ကမွေးထားတဲ့ ခွေးကြီးကခဲတာ သို့မဟုတ် ခွေးငယ်ကလေးကခဲလိုက်တာ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ အကြောင်းပြချက်ကလေ။
သူ ခပ်ဖြေးဖြေးလုပ်တာတော့မှန်တယ် ဒါပေမဲ့ စည်းချက်ကျကျနဲ့ သူကစားနေတာ တစ်ခါတစ်ခါများ ကျွန်တော် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အာသီသ ဖြစ်မိပေမယ့် သူ့ဆိုဒ်နဲ့ဆို ကျွန်တော့်တင်ပါးလေးကွဲထွက်သွားနိုင်တာကြောင့် အသာမှိန်းနေရပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူတွေနဲ့ခဲထားတာကြောင့်အသံမထွက်နိုင်တော့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ ရွှေဥတွေနဲ့အတူ ဆီးစပ်ကအမွှေးနုတွေက ကျွန်တော့် တင်ပါးကိုလာလာထိတာကိုတော့ သူ့ငပဲတဆုံးသွင်းချိန်မှာအမြဲခံစားရပါတယ်။ `ဖြန်း´ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့် ကုန်းပေးလိုက်တဲ့အနေ အထားမှာ သူက ရိုက်ထဲ့လိုက်တာ သွေးကြောထဲက ဖြင်းကနဲဖြစ်မိရသလို နှုတ်ဖျားကလည်း အားကနဲအော်မိရပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ သွင်းရတာ အဆင်ချောလာလို့ထင့် နည်းနည်းလေးမြန်မြန်သွက်သွက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ပခုန်းကိုအားပြုကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်အစုံရဲ့ အားထည့်ပုံကလည်း ဖီလင်တစ်မျိုးထူးပါရဲ့။
သူအရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် ပစ်သွင်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့် အာခေါင်တွေခြောက်သွေ့ကာ ရေဆာလာသလို နှုတ်ဖျားကနေလဲ အသံမထွက်ဖို့ကိုမတားမြစ်နိုင်ပါဘူး သိပ်တော့မကျယ်ဘူးပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကိုပွက်သပ်ပေးတဲ့ သူ့လက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်းတွေ ကလည်း ဒီတစ်ခါတော့ ကြက်သီးထနိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုထူးပုံကတော့ ကျွန်တော် အောက်ကနေတဲ့အနေအထားကို နေရတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်ပြန်မကိုင်မိပါဘူး။ အခုသူက ကျွန်တော့်ကိုအနောက်ကနေ ညှောင့်နေရင်းမှ သူ့လက် တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လှမ်းလှမ်းကစားပေးတာ ဘယ်လိုပြောရမလည်း တကယ့်ကို Turn-on ပြန်ဖြစ်လာစေသလို တကယ် ဘယ်လို ပြောရမှန်းမသိအောင် ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ သူငယ်ချင်းတို့ကောခံစားဖူးရဲ့လား….တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေပြောပြတာကတော့ နောက်ကနေသာ ကောင်းကောင်းသူတို့ပို့ပေးရင် ရှေ့ကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပြန်ကိုင်စရာမလိုဘဲ အလိုလိုဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ရတဲ့ ဖီလင်က မိုက်ပါသတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မကိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ ပါတနာကိုပြန်ချလိုက်ရမှ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တတ်တာလေ။ အခုတော့ တကယ်မိုက်ပါတယ်…..Oishi ကြေငြာသလို ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်။
ကျွန်တော်တို့အနေအထားပုံဟန် သုံးလေးမျိုးလောက်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ သူ့အချုပ်သားကိုသူ မုဒိမ်းကျင့်သလိုမျိုး အတတ် ဆန်းချင်သေးတာပါ။ လက်တွေကိုချုပ်ကိုင်တယ် တင်ပါးတွေကို ရဲနေအောင်ရိုက်ခတ်တယ် ပြီးတော့ နင့်ကနဲ နင့်ကနဲနေအောင်သူက ဆောင့်ချင်တတ်သေးတာလေ။ သူ့အပြုအစုတွေမှာ မျောပါသွားစဉ်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ဘာမှမစဉ်းစားချင်တော့ဘဲကြမ်းချင်ရမ်းချင် သား။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဒိတ်တင်သိပ်မရှားပေမယ့် မလုပ်ဖြစ်တာကြာတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေထဲမှာ အခုအကြိမ်ဟာတော့ဖြင့် တကယ့်ကို မမေ့နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ တေးထားခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးထက်ပိုနေ သလားပဲဗျာ။ ကောင်းနေတာတွေအားလုံးဟာ မကြာခင် အဆုံးသတ်တော့မယ်ထင်ပါတယ် သူ့အသက်ရှူသံတွေကလည်း တမျိုး။ သူ့ငပဲ ဟာလည်း ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ဂျီစပေါ့လို့ဆိုနိုင်မယ့် prostate ကို ဒက်ထိနှိုးဆွပြီးကစားနိုင်နေတော့ ကျွန်တော့်မှာ လက်နဲ့သိပ်ကိုင် စရာမလိုတော့ဘဲ မတ်တောင့်နေတာများ အခုပဲ ပေါက်ထွက်တော့မယ်။ အာ….အ..အ သေနတ်ပြောင်းဝကနေ ကျည်ဆံတွေပစ်ထွက်တဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော့်ငပဲကနေ သုက်ရည်တွေဟာ အများအပြားထွက်ရပြန်တယ် နောက်တစ်ခါပါ။
ကျွန်တော့်ခရေကြွက်သားများရဲ့ ရှုံ့ချီပွချီဖျစ်ညှစ်မှုများကြောင့်ထင့် သူသည်လည်းသိပ်ပြီးထိန်းမထားနိုင်တော့ပါဘူး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ သူ့ငပဲကိုအဆုံးထိဖိပြီး ‘AAAWWWRROOOAARR!’ အပြည့်များဖြည့်ထည့်လိုက်သလားပါပဲ။
ကျွန်တော်သည်လည်းအိပ်ယာပေါ်မှောက်လျက်ကျပြီးငြိမ်သက်မိသလို သူသည်လည်းကျွန်တော့်အပေါ်ကထပ်လျက်အနေအထားအတိုင်း အတန်ကြာငြိမ်နေပါတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းမြောက်သလိုလို ကြည်နူးသလိုလိုခံစားရတာထူးဆန်းပါရော။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံတွေ လှိုက်မောနေသလို ချွေးတွေလည်းရွှဲနေပါပြီ။
သူခဏလေးဆက်ငြိမ်နေပြီးမှ သူ့ငပဲကို တကယ့်ဖြေးဖြေးလေးဆွဲချွတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ လှဲလျောင်းအိပ်စက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဘက်ကိုတစောင်းလှည့်လိုက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့အနက်ရောင်မျက်ဝန်းတွေထဲ စိုက်ကြည့်မိပြီးနောက် နှစ်ဦးသား ခဏတော့ ဖက်လှဲတကင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်မိကြတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးလေးညည်းသလိုလေသံနဲ့ `ခင်ဗျားက မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းကောင်း-ိုးတတ်တာပဲဗျာ´လို့ပြောလိုက်တယ်။
သူကလည်း ခပ်တိုးတိုးပြန်ပြောတယ် `ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံး အကောင်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲလေ´
သူ စကားစဖြတ်ကာ အိပ်ယာပေါ်ကနေထရပ်ရင်း အိမ်သာထဲဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် တံခါးလေးကိုအသာဟ ကောင်တာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူအုပ်စုကရှိနေဆဲပါပဲ။ သူ့လူနှစ်ယောက်ကလည်း ဖမ်းထားတဲ့လူတွေကို စကားတွေပြောနေဆဲ ပဲဗျ။ သူ့ဖုန်းက အချက်ပေးသံလိုလိုပေါ်လာတော့ ´Duty Calls´ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီး သူ့ ယူနီဖောင်းကိုပြန်လည်စတင်ဝတ်ဆင်ပါတယ်။
သူ သေနတ်ပါတဲ့သားရေခါးပတ်ကိုပြန်မ၀တ်ခင်မှာတော့ ကျွန်တော့်လျာနဲ့လျက်ခဲ့သော စိုစွတ်နေသောအနားကို သူနမ်းကြည့်သလို လုပ်ပြီး နောက်မှ ပြန်ဝတ်လိုက်ပါရော။ သူ့မျက်နှာဝယ် ပြောရခက်တဲ့အပြုံးမျိုးပေါ်လာပြီး သူ့မျက်လုံးများဟာလည်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တာ ပုံစံတစ် မျိုးလို့ထင်ရပါတယ်။ တောက်ပသလိုလို အေးစက်သလိုလို။
`တစ်ခုခုတော့ သင်လိုက်ရသလိုပဲဗျာ´ ကျွန်တော်သူ့စကားတွေ ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် စိတ်လိုလက်ရ ပြန်လည်တုန့်ပြန်စကားပြောပေးလိုက် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သိပ်မသိသေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုး မဖြစ်ချင်ခဲ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းက အခုမှတွေ့ အခုပဲအိပ် အခုပဲဆိုတဲ့လူများအပေါ် ဒီလိုခံစားချက်မျိုး တစ်ခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ပြောရမယ် နဲ့တူရဲ့။ သူ့ကိုတော့ စိတ်ထဲနင့်နင့်နဲနဲဖြစ်သွားသလိုပဲဗျာ။
`သူ ကျွန်တော့်ကိုကို တည့်တည့်ပြန်ကြည့်တယ် ပြီးတော့ စူးနက်သော အဓိပ္ပာယ်ပါသော စကားဖြင့်မေးပါတယ် `ခင်ဗျား….. နက်ဖြန် ဒီမှာပဲရှိဦးမယ်မဟုတ်လား?´တဲ့။ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်တတ် အဖြောင့်အတိုင်းဆက်ဆံတတ်တဲ့သူများရဲ့ ကွယ်ဝှက်ထားသလိုနဲ့အဖြေပါသော သိချင်စိတ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေ ဖျက်ကနဲ ဖျက်ကဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ မနက်ဖြန် မှာ နောက်မြို့တစ်မြို့သို့ခရီးဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဆိုပေမယ့် `အဲ…နေလို့တော့ရပါတယ် ဘာအစီအစဉ်ရှိလို့လဲဗျ´
သူ့ခမျာ သွားသုံးဆယ့်နှစ်ချောင်းလုံးများပေါ်မလားထင်ရအောင်ပြုံးသွားပြီးနောက် `နက်ဖြန်နေ့လည်စာစားချိန် ၁၂း၀၀နာရီလောက်တွေ့ ကြမလား? ကျုပ်က ည ၄နာရီလောက်မှ ဂျူတီပြန်ဝင်ရမှာဆိုတော့ နေ့ခင်းတစ်နေ့ခင်းလုံးနဲ့ ညဦးပိုင်းတစ်ချိန်လုံးတွေ့နိုင်တာပေါ့´တဲ့။
ကျွန်တော် သတိအနေအထားဖြင့် မတ်မတ်ရပ်လိုက်ကာ Salute တစ်ချက်သူ့ကိုရိုက်လိုက်ရင်း ‘ဟုတ်ကဲ့ဆရာ….ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး…. ကျွန်တော် ဆရာ့စီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို အဖမ်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ´လို့ပြောလိုက်တယ်။
သူ့မျက်နှာဝယ် အနည်းငယ်ပြုံးသွားပြီးနောက် `ခင်ဗျား တွေ့ချင်မှဖြစ်မှာနော်´တဲ့ခပ်တိုးတိုးဆိုတယ်။
ကျွန်တော် အ၀တ်မ၀တ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့် ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကိုဖက်လိုက်မိတော့ သူ့ရင်ထိုးတံဆိပ်က ကျွန်တော့် ရင်အုပ်ပေါ်ဝယ် အမှတ်သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ဖိနှိပ်ပါရော။ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်ကြီးထဲခိုဝင်ရတာ ဘယ်လိုများလဲဆိုတော့ ကြည်နူးမိရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နက်ဝန်းတွေကိုပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း `ခင်ဗျား ဘယ်အချိန်လာချင် လာချင် ကျွန်တော် အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားချင်ပါတယ်ဗျ´လို့ တိုးတိုးငြင်သာပြောလိုက်ပါရဲ့လေ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား အနမ်းမိုးချွေလိုက်ကြပြန်ပါပြီ နုညံ့စွာ….အမေးအဖြေမဲ့စွာ….ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်ဝစွာဖြင့်ပေါ့နော်။
သူ အာမခံတယ် `မနက်ဖြန်နော်´လို့ပြောပြီးနောက် တံခါးကိုဖွင့် တာဝန်ချိန်အတိုင်း တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ဖို့ထွက်ခွာသွားပါတော့ တယ်။ ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ စောင့်ရှောက်အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ပေါ့။
အမေရိကန် အလှကုန်တံဆိပ် Avon ပြောသလို ….မနက်ဖြန်…နောက်တော့ မနက်ဖြန်…ပြီးပြန်တော့ မနက်ဖြန်´လို့ ကျွန်တော်ရွတ်ဆိုရင်း ရေချိုးခန်းစီ ခြေလှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
တဖွားဖွားကျလာတဲ့ ရေပန်းဖွားအောက်ဝယ် မွှေးပျံ့တဲ့ ဆပ်ပြာရည်ရနံ့ကြောင့် သန့်စင်သွားသော စိတ်နဲ့ကိုယ်သည် မနက်ဖြန်အတွက် အားအင်ဖြစ်စေသည်ပေါ့။
Alex Aung ( 20 June 2014)
Note: ဇာတ်လမ်းပါအချို့အချက်တွေဟာ အယူအဆမှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းဖြေဖတ်ဖို့ကြိုးစားထား ပါတယ်နော့။
Posted by Alex Aung at 1:27 PM No comments:
♡ ♡ I Give You My Love ♥ ♥
အိပ်ယာကအထ မျက်တောင်အခတ်မှာ ကျနော့်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဆံပင်တွေရှုပ်ပွနေခြင်းကို သတိပြုမိပါတယ်။ ပါးစပ်တွေ အာခေါင်တွေ ခြောက်နေတာများ အခုအချိန် ...
ည မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ သတင်းစုံ ကြေငြာတာ ပြီးသွားပါပြီ။ ယခုထိ ကိုကြီးအောင် ရေချိန်မကိုက်သေး။ မကိုက်ဆို တညနေလုံး ဘာတစ်စက်မှ မသော...
ဒီနေရာ အဲ ဒီနေရာဟာ လူကြီးဖတ်စာအုပ်တွေရောင်းတဲ့ မြို့မြောက်ပိုင်းအဖြစ်သာမက အမှတ်၃၅ (ခ) ရပ်ကွက်ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းလမ်း ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ကံဆိုး...
တစ်မိုးအောက်မှာ..ရောက်မလာမယ့်မိုးကိုမျှော်ခဲ့တယ် (ပထမဆုံးနေ့) ကားပေါ်တွင်ရှိနေစဉ်တစ်ချိန်လုံးဖွဲဖွဲသာရွာခဲ့သောမိုးသည်ကားပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်န...
"လူကို လူလို့သာ မြင်ပေးဖို့ပါ” ဆိုတဲ့ ကိုနေဦးလွင်...
Danny's Father, Kyle.